LA မှာ ယာဉ်တိုက်မှုကြုံခဲ့ရတဲ့ Justin Bieber
On March 26, 2018 By fairy
ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့က အိမ်အပြန်လမ်းမှာ တစ်ယောက်တည်းကားမောင်းလာတဲ့ Justin တစ်ယောက် သူ့ရဲ့ ဒေါ်လာတစ်သိန်းတန် Mercedes ကားကို နောက်ကနေဝင်အောင်းခံလိုက်ရပါတယ်တဲ့။
ကံကောင်းစွာနဲ့ ကားပေါ်မှာ တစ်ယောက်တည်းပါလာတဲ့ Justin ကတော့ ဘာမှထိခိုက်တာမရှိပဲ သူ့ကားကလဲ အပျက်အစီးမရှိသလောက်ပါပဲ။ သူ့ကားကိုဝင်အောင်းတဲ့ Range Rover ကတော့ ရှေ့တခြမ်းလုံးတော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပျက်စီးသွားခဲ့ပြီး ကားမောင်းသူကတော့ ဒဏ်ရာမရခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။
just watched Justin Bieber get intoacar crash. this is the epitome of living in LA. i love u and hope ur ok @justinbieber pic.twitter.com/AHUIethRw9
— maisey ? (@maiseymcginnis) March 24, 2018
အရင်တုန်းကထစ်ကနဲဆို ရန်ဖြစ်တတ်ပွဲဆူတတ်တဲ့ Justin တစ်ယောက် ဒီတစ်ခါမှာတော့ အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်နေရုံသာမက ကိုယ့်ကားကိုဝင်တိုက်ခဲ့သူကို ဂရုတစိုက်နဲ့ အဆင်ပြေလားလို့မေးမြန်းခဲ့ပုံရတဲ့ လက်မနှစ်ချောင်းထောင်ပြနေတဲ့ ဓာတ်ပုံဟာ လူမှုကွန်ရက်မှာပျံ့နှံ့နေခဲ့ပါတယ်။ ယာဉ်တိုက်မှုကိုမျက်မြင်ကြုံခဲ့ရတဲ့ သူ့ပရိသတ်တချို့ကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင် ရိုက်ထားတဲ့ video တွေကို social media တွေမှာတင်ခဲ့ကြလို Justin တစ်ယောက်ဘာမှမဖြစ်လို့ စိတ်အေးရပါတယ်ဆိုတဲ့ fan တွေကလဲ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။
https://t.co/x1GNVlvbLI here’salink about the accident
ယာဉ်တိုက်မှုကို ရဲတွေရောက်လာခဲ့ပေမယ့် ဘာမှပြဿနာကြီးကြီးမားမားမရှိပဲ သူတို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးကလဲ ပြေပြေလည်လည်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ Justin ကတော့ အေးဆေးအိမ်ပြန်သွားခဲ့ပြီး Range Rover ကားကတော့ အခြေအနေသိပ်မကောင်းလို့ ဆွဲခံလိုက်ရပါတယ်တဲ့။
Justin ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လလဆန်းလောက်မှာပဲ Selena နဲ့ ပြတ်ထားပြီး လတ်တလောမှာတော့ Model Baskin Champion နဲ့ တွဲနေကြသလားဆိုပြီး သတင်းတွေထွက်နေတာမို့ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်ကြရဦးမှာပါနော်။
ယူတို့ရော ဘယ်သူနဲ့ သဘောတူကြသလဲ???
PREVIOUS POST Previous post: အဆိုပြိုင်ပွဲတွေကနေ ကျော်ကြားလာခဲ့ကြတဲ့ အဆိုတော်များ
NEXT POST Next post: Kpop Idol Group တစ်ခုဖြစ်တဲ့ NCT ရဲ့ Video ကို IG မှာ တင်ခဲ့တဲ့ Chris Brown